Ogaden News Agency (ONA) – Qalalaase Kabilowday Gobolka OMO Iyo Xiisada oo Siikordhaysa.
Qalalaase Kabilowday Gobolka OMO Iyo Xiisada oo Siikordhaysa.
Posted by Dulmane	/ April 27, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Ginja ee Gobolka OMO ayaa sheegaya qalalaase hor leh oo kajira magaalada Gonja iyo dhulka kuxeeran. Warka ayaa intaas kudaraya in qalalaasuhu uu bilowday kadib markii darbiyada magaalada Gonja lagu soodhajiyay waraaqo dadka deegaanka lagaga codsanayo in ay dibada usoo baxaan.
Waraaqaha lagudaadiyay magaalada Ginja ee Gobolka OMO oo lagusoo qoray afka Axmaariga ayaa lasheegay in lagu xardhay erayo lagu taageerayay jabhada Gimbot 7 iyo Jabhadaha kale ee ladagaalama xukuumada wayaanaha.
Dadka shacabka ah ee kudhaqan Gobolka OMO oo katirsan waxa shucuubta koonfureed laysku yidhaahdo ayaa taliska wayaanaha katirsanaya dhibaatooyin gooni ah oo ciidanka gumaysigu ay kuhayaan shacabka ree OMO.
Aqoonyahanka iyo waxgaradka udhashay Gobolka OMO ayaa lasheegayaa in ay kafikirayaan sidii ay usamayn lahaayeen Jabhad udagaalanta dadka ree OMO oo xornimo gaadhsiisa deegaanka.
Dhinaca kale dadka kudhaqan Gobolka OMO ayaa soo goconaya dhul ay shacabku lahaayeen oo xukuumada wayaanuhu ay ka iibsatay shirkado shisheeye, halkaas oo lacag aad ubadan ay kasoo gashay taliska wayaanaha.
Dhinaca kale ciidamada bahalka ah ee gumaysiga ayaa gacan bir ah kuqabtay dhalin yarada kacdoonka kawada Gobolka OMO iyo guud ahaan Gobolka Shucuubta Koonfureed waxaana laxidh xidhay dadwayne aa ubadan.
Sikastaba ha ahaatee waxaa bilihii iyo baryihii udambeeyayba soobadanayay kacdoonada shacabka kuwaas oo lafilayo in ay badin doonaan cidhiidhiga iyo culayska saaran kooxda TPLF wayaanaha.